kulan lagu sheegay in Maryan Cariif Qaasin matali Karin beesha cabdalle sabdi Magacaabidii Bootaan oo mar kale Muqdisho ka dhacay | Somalisan.com Home
kulan lagu sheegay in Maryan Cariif Qaasin matali Karin beesha cabdalle sabdi Magacaabidii Bootaan oo mar kale Muqdisho ka dhacay 8/28/2012 2:49:00 P
Odayaal, Waxgarad iyo Aqoonyahano ku abtirsada beesha Cabdi Sabdi ee Karinle Hawiye oo maanta Muqdisho kullan isugu yimid ayaa waxa ay ka hadlleeen musuqmaasuq ay sheegeen in uu ku sameeyey guddiga farsamada xulista Baarlamanka cusub isla markaana isdaba marin uu ku sameeyey xubnihii ay ku lahaayeen baarlamanka cusub.iyagoona baaq u diray maxkamada sare.
Ugu horeyn nabadoon Cali Maxamad Faarax oo goobta ka hadllay ayaa sheegay in guddiga farsamada uu si qaldan u maamulay xildhibaanadii u matali lahaa baarlamanka cusub isla markaana ay qaabileen shaqsiyaad aanan matallin beeshooda dhanka kalena waxa uu ka digay in xildhibaanada Baarlamanka u matallaya lagalla tashto dad aanan ku Abtirsan Beesha.
Sidoo kalle isna nabadoon Cabdullaahi Xasan Raage oo madasha ka hadllay ayaa maxkamada sare ugu baaqay inay go'aano dag dag ah ka soo saarto musuqmaasuqa lagu sameeyey xildhibaanadii u matalli lahaa baarlamanka cusub. iyadoona dhamaan waxgaradkii iyo aqoonyahanadii goobta ka hadlay ay isku raaceen in aanay matallin xildhibaanad Maryan Cariif oo loo dhaariyay xubinta Baarlamanka dhawaan.
Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay guddiga farsamada si toos ah u shaaaciyeen xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamanka cusub ayaa waxaa soo baxayay qaylo dhaan kasoo yeereysay qaar ka mida bulshada Soomaaliyeed kuna aadan in si cadaallad ah aanan loo maarayn arintaasi.
Shir jaraid oo ay qabteen qaar ka mid ah odoyaasha dhaqanka Culumaa’udiin dhalinyaro haween iyo waxgarad kale oo ay ku sheegeen in Drs. Maryan Cariif Qaasin matali Karin beesha Cabdalle Sabdi.
Shir jaraaid oo ay qabteen qaar ka mid ah odoyaasha dhaqanka culumaaudiin dhalinyaro haween iyo waxgarad kale oo ay ku sheegeen in Drs Maryan Cariif Qaasin matali Karin beesha cabdalle sabdi .
Shirkaan ayaa waxaa ka qeyb galay aqoonyahano, odoyaal dhaqameedyo gabdho dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay.
Shirka oo ahaa mid albaabadu u xirnaayeen ayaa gabagabadii shirka wixii ka so baxay waxaa saxaafada u aqriyey qaar ka mid ahaa ka qebgakyaasha sida Cabdulaahi Xuseen Raage ( Cabdulaahi Xidig ) Gudoomiyahay gudiga dhaqanka ee beesha Cabdalle sabti Cali Shanle iyo Cadar shalaqbeen.
Shirkaan ayaa fariin loogu direy Ugaaska beesha iyo Yuusuf Axmed Maxamed (Bootaan) iyo beesha Cabdalle Sabti Meel kasta oo ay joogaan.
Shirkaan jaraaid ayaa ku saabsanaa sidii aragti mideysan beesha Cabdalle Sabti uga qaadan lahaayeen isla markaana looga jawaabi lahaa arin ka dhacday hotel Amiira oo ay sheegeen in lagu qalday indhaha caalamka ka dib markii uu sheegtay nin aan u dhalan beesha Cabdalle sabti inuu xildhibaan u magacabay Drs. Maryan Cariif Qaasin taasoo ay beeshu ka biyo diiday.
Sida uu saxaafada u sheegay Shirkan ayaa Aflagaado iyo xumaan u geystay mid ka mid ah beesha Majabe sabdi oo magaciisa uu ku sheegay Yuusuf Axmed Maxamed (Bootaan) xaqiiqdii ninkaas waa nin sameeyey waxyaabo badan oo isku dardar ah wuxuuna sheegay inuu u gafay beesha Cabdalle sabdi iyo Ugaaska guud ee beesha Murusade isaga oo dhax fadhiistay shir beeshu laheyd isaga oo aan lagu casuumin isla markaana hadalo ka jeediyey.
Beeshaan ayaa sheegtay in uusan u aheyn nabadoon, Ugaas iyo gudoomiye dhaqan hase yeeshee uu isticmaalay magacooda isaga oona ijaafeeyey ugaaska beeshu laheyd sanado badan ka hor ee ah ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Ugaas Faracade oo sagaal fac ugu dambeeya xaga ugaasnimada.
Beesha Cabdalle ayaa ka dalbatay beeshii uu ka dhashay Bootaan in ay raali galin ka bixiyaan gafka uu kula kacay beesha cabdalle iyo ugaaska guud ee Murusade iyo been ka sheegida uu yiri arintaa Majabe sabdi ayaa gudbiyey isaga oo dhamay magacooda.
Sirka Jaraaid ayaa lagu yiri kuma haboona isaga oo majabe Sabti ah in uu helo xubin baarlamaana isku heysto uu ka dhax kalluumeysto.
“Bootaan maanta wadani uma qubeyso cid dhaqi karto lama arko beesha Majabe sabti, habar idinlo ama Geedi bariisa cadde waxuu cabdalle ka codsanayaa odaygaas dhiiqada uu lugaha la galay ninka dheer ee bidaarta leh meediyaha ayaan ka arkay wuxuu sameeyey wax la soo koobi karo maaha” ayuu yiri Cali Shanle.
Maryan Cariif wax aysan xaq u lahayn Bootaan ma siin karo xitaa Mahiga ayaan siin Karin waana gabar walaasheyna ah balse ishu tif ka mudayo ma ma aragto bootaan inay garabsato waxaa uga qeyr badan in ay tolkeeda dhax timaado oo ay tiraahdo walashiin ayaan ahay.
Dhanka kale Cali Shanle ayaa ugaaska ka raali galiyey wixii gef ahaa ee kaga yimid oday Sabti ahaan, isagoo ula jeeday hadalkii ka soo baxay Bootaan ee lagu ijaafeeyey ugaaska wuxuuna daba dhigay in aan arintaa uu sameeyey Bootaan lagu cafin doonin ninkaasna cidii qabashadiisa leh ayuu ugu baaqay in ay tolka ka qabtaan.
Sidoo kale raggii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Xuseen Raage(Cabdullaahi Xidig) ayaa ku eedeeyey inuu meel ka dhac fool xun ku sameeyey Beesha Cabdale sabti. habar idinle.Majabe iyo Ugaaska beesha intaba isagoo tibaaxay in uusan matali Karin dhamaan beelaha Murusade.
Bootan ma dooran mana duuban xegeena wax xil ah kama haayo ayaa lagu yiri warsaxafadedka.
Cabdulaahi Xidig “maxkamada sare iyo cid kasta oo ku shaqo leh waxaan ka codsaneynaa in xaqa ay leedahay beesha Cabdalle sabti ay go,aan deg deg ah ka gaarto hadii ay ka gari weysana 4 sano ee soo socoto weysocon doontaa xaqa ay naga qaadeen bootaan iyo gudiga 27ka ah ee la jira“
Kulankii ka dhacay hotel amiira mar wax laga weydiiyey ayuu sheegay in uu ahaa kulan majabe iskuugu keensadady dad aan ehel u aheyn isla makraana beesha go’aankeeda laheyn.
Xildhibaanimada Drs. Maryan Cariif ayuu ku sheegay in ay tahay mid daaqada laga soo galiyey aysan umatali Karin beesha cabdalle magaceedana si qaldan uu u gudbiyey bootaan oo la sheegay in uu la shaqeynayey gudiga farsamada ee ka koobnaa 27 xubnoo oo uu sheegay in ay ka socoto jeeebkooda.
Shirka jaraaid ayuu kaga codsaday ugaaska beesha murusade in xildhibaanka beeshu doratay in si deg deg u horgeeyo gudiga farsamada si loogu dhaariyo masuuliyada uu beesha u haayo isaga oo sheegeyna in magaciisa uu ku jiro liiska beesha ee la gudbiyey sidaa ayuu sheegay in beeshu ku qanacsan tahay .
Cadar shalaqbeen oo iyane goobta ka hadashay ayaa daaha ka orgta in xubinta la isku heysto ay tahay xubin ay leedahay beesha Cabdale sabti bootaana uu yahay majabe sabti kurisga la isku heystana ay leedahay beesha cabdalle sabti sida rateedna uusan wax go.aan ah ku leheyn waxaana ay tilmaanta in uu si toos ah u soo fara galiyey beerimo beel uusan ka dhalan waxaana ay ugu baaqday in uu isaga dhaxbaxo arintana ay u taal beesha dhaxdeda.
Maryan cariif ayey sheegtay in ay 12 sano kursiga si sharaf leh ugu fadhiday waxayna uga digtay in ay 4 sano oo sharaf dhac ah ku darsato waxayna sii raacisay in aan looga hari dooni xubinta beesha wax qeybsiga u soo gaartay.
Kursigaan waxaa leh Cabdalle sabti qofkii ay u doortaan ayaa beesha ugu shaqeynaya mana aha ayey tiri wax la iska dhaxlayo ama qof weligiis uu ku fadhinayo waxayna dhanka kale ka raali galisay warxumadii beesha majabe sabti mid ka mid ah ugu timid uagaas Cabdulaahi Ugaas Xaashi ugaas faracade
“Ugaas ka raali noqo nama matalo Yuusuf Axmed Maxamed (Bootaan) Anagaa curadkii sabti ah majabane go’aan arintaa kama gaari karo.
warkii warkaan ka horeeye somalisan.com/